Indawo yokuhlala kunye namagumbi anepuli kunye nendawo yokoja - I-Airbnb
Indawo yokuhlala kunye namagumbi anepuli kunye nendawo yokoja
Igumbi lakho lokulala e indlu sinombuki zindwendwe onguMarcio
Yonwabela ukubuka iindwendwe kwi-BB: INTLE, INTLE kwaye ishibhile!
Indawo yokuhlala enamagumbi okulala ayi-3 namagumbi okulala ayi-2 embindini weAdamantina ohlala iindwendwe ezifikelela ku-20 uthe zava, kufutshane neevenkile ezinkulu, iivenkile zokutyela, amayeza, ii-ice cream parlors njl njl.
Ineebhedi ezitofotofo, umatshini okhupha umoya obandayo okanye oshushu, i-intanethi eyi-200 mega optical Wi-Fi, ikhitshi elixhotyisiweyo, igumbi lokutyela, igumbi lokuhlala elinendawo ekhethekileyo enesofa, iibhegi kunye ne-50"ekhokelwa yi-Smart TV kunye neNetflix, ipuli enamanzi ashushu ayi-32, igadi kunye nendawo yokoja.
Indawo yokuhlala enamagumbi okulala ayi-3 namagumbi okulala ayi-2 embindini weAdamantina ohlala iindwendwe ezifikelela ku-20 uthe zava, kufutshane neevenkile ezinkulu, iivenkile zokutyela, amayeza, iivenkile ze-ice cream njl njl.
Ineebhedi ezitofotofo, umatshini okhupha umoya obandayo okanye oshushu, i-intanethi eyi-200 mega optical Wi-Fi, igumbi lokutyela, igumbi lokuhlala elinendawo ekhethekileyo enesofa, iibhontsi kunye ne-50"ekhokelwa yi-Smart TV enesibhakabhaka, iNetflix, iPrime Video kunye neendlela zokudlala zeGlobo.
Ikhitshi livuleke kakhulu ibe liphelele: isitovu esiyi-6 esineoveni, i-microwave, ifriji, ifriji yeziselo, isinki ye-granite, i-crockery kunye nezitya ezipheleleyo. Indawo yokuhlamba iimpahla emzimbeni wendlu, enomatshini wokuhlamba impahla netanki. Kukho amagumbi okuhlambela ayi-6 kuwo onke, kuquka indlu yangasese. Iinethiwekhi ziyafumaneka ukuze iindwendwe zihlale kamnandi ibe zinendawo yokupaka iimoto eziyi-3 ibe kulula ukupaka phambi kwendlu.
Indawo yolonwabo inechibi elifudumeleyo eliyi-32M, igumbi lokuhlambela, iindawo zokutyela ilanga, iigadi kunye nendawo yokoja.
Ihostele ineenkqubo zokhuseleko lomlilo ezifana nezicima-mlilo, izibane zemeko yongxamiseko, ukuphuma kwimeko yongxamiseko kunye nomzila wokubalekela.
Xa kukho imeko yongxamiseko fowunela u-193 kwiSebe Lezomlilo nakwiiPolisa Zemikhosi eziyi-190.
I-Rua General Isidoro, 572
I-Centro - uAdamantina - SP.
hostelsantorini # inn
# adamantina # sp
Indawo yokuhlala isembindini weAdamantina, kufutshane neevenkile ezinkulu, iivenkile zokutyela, iibhari, ii-cinema, amayeza, iivenkile ze-ice cream njl njl. Nantoni na inokuphumelela ngokuhambahamba okufutshane.
Igama lam ndinguMarcio kwaye ndifumaneka iiyure eziyi-24 ngefowuni kunye neWhatsApp 18 99-0101 kwaye ngokobuqu ngexesha lomsebenzi.